Archdiocese of Mandalay blog: အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း(၂)
ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး သမိုင်းမဏ္ဍိုင်
“ကမ္ဘာဦးအစ အာဒန်က” ဟူသော ဆောင်ပုဒ်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းလေးထောင်ခန့်က အစချီပြီး ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသော ဂျူးတိုင်းရင်းသားထု တစ်ရပ်လုံး၏ ဘာသာရေးခံယူချက် တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ ဂျူးတိုင်းရင်းသား အမျိုးအနွယ်ဖွား တစ်ရပ်လုံးကို အနီးကပ် စိစစ်သုံးသပ်ကြည့်သော် ယင်းတို့အချင်းချင်း ကြားမှာပင် အလွန်ကွဲပြားခြားနားလျှက်ရှိသော အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်များ၊ ယဉ်ကျေးမှု့ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ ဘာသာရေး ခံယူချက်များ ဖြစ်ပေါ် သက်ဝင်နေသည်ကို သမိုင်းတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ (၁)သို့သော် ထိုသို့အချင်းချင်း ကွဲပြားခြားနားလျှက် ရှိကြသော်လည်း၊ ဂျူးတိုင်းရင်းသားထု တစ်ရပ်လုံးသည် တစ်မြေတည်းဖွား၊ တစ်ရေတည်း သောက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂျူးအမျိုးအနွယ်ဖွား တိုင်းရင်းသားတို့၏ မွေးသမိခင်ကြီးကား “သမ္မာကျမ်းစာတော်” ကြီးပင် ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်သည် ဂျူးတိုင်းရင်းသားများ လက်ခံ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သော ဘာသာရေး အယူဝါဒ၏ အသက်သွေးကြောကြီးပင် ဖြစ်သည်။ ထိုဘာသာရေး အသက် သွေးကြောကြီး၏ လှုံ့ဆော်ချက်များကား၊ ဂျူးနွယ်ဖွားတိုင်းသည် တရားပညတ်တော် အရ၊ ဂျေရုဇလိင်မြို့တော်ရှိ ဗိမ္မာန်တော်ကြီးသို့ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း သွားရောက် ၀တ်ပြုတတ်ကြရသည်။ အခါတော်ပွဲကြီးများကို စုပေါင်း ကျင်းပကြရသည်။ တဖန် ရက်သတ္တပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် ဥပုသ်သီတင်း ဆောက်တည်ကြရသည်။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်းမှာမူ မိခင်များသည် မိမိတို့ ရင်သွေးငယ်များအား သမ္မာတရားတော်ကို မနားမနေ သင်ကြားပို့ချပေးရသော တာဝန် ၀တ္တရားရှိသည်။ (တရားဟောရာကျမ်း၊ ၆ : ၄-၇ ကိုရှု) ။ ဤသို့ စသည်များကို နှစ်စဉ်၊ လစဉ်၊ အပါတ်စဉ်၊ နေ့စဉ်၊ စောင့်ထိန်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြလျှက် ဘုရားသခင်ကို လက်ခံ ယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြပြီး၊ တူညီသော သီလပါရမီများကို နေ၀င် နေထွက် ကျင့်ဆောက်တည်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဘ၀ သမိုင်း ခရီးလမ်းကြီးပေါ်၌ အတူတကွ လျှောက်လှမ်းလာကြခြင်း၊ အတူတကွ တရားဘာဝနာ ပွားများကြခြင်း၊ စသည်တို့သည် ဂျူးနွယ်ဖွား တိုင်းရင်းသားများအား တူညီသော ဘ၀ တည်ဆောက်ရေးသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
(၁) THE LIVING WORLD OF THE OLD TESTAMENT
Bernhard W.Anderson Longmans,Green And Co.Ltd.
LONDON,1967.2nd Edt. Ch.I Isreal’s Sacred History.
The Life story of Isreal. Pg 2
ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းသည် အထက်ဖော်ပြပါ ဂျူးတိုင်းရင်းသားတို့ လက်ခံ ကိုးကွယ်သော ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးမှ မျိုးဆက်သစ်တစ်ရပ် အဖြစ် သန့်စင်မွေးဖွားလာခဲ့သော ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။ အထက်တွင် တင်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဂျူးအုပ်စုများအတွင်း အလွန် ကွဲပြားခြားနားသော သဘောတရား ရေးရာများ ရှိကြသကဲ့သို့ ခရစ်ယန်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ အတွင်း၌လည်း၊ လူမျိုးရေးရာ၊ နိုင်ငံရေးရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများတွင် ကွဲပြားခြားနား လျှက်ရှိပေသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကွဲပြား ခြားနားချက်များ ရှိကြသော်ငြားလည်း ဂျုးတိုင်းရင်းသားများ ကဲ့သို့ပင် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် “သမ္မာကျမ်းစာတော်” မှာပင် ပြန်လည် စုစည်းနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး အယူဝါဒအချုပ်ကို အကျဉ်းမျှ ဖော်ပြလိုသည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ယုံကြည်ရာ အချုပ်မှာ၊ တစ်ဆူတည်းသော ထာဝရဘုရားသခင်ကို လက်ခံ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် အစအဆုံး မရှိ အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် စကြာဝဠာ တစ်ခွင်လုံးရှိ လူသားတို့ မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်ရာ/ မမြင်နိုင်ရာ ခပ်သိမ်းတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ထာဝရဘုရား တစ်ဆူအရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။
တဖန် ကျွန်ုပ်တို့ သိမြင်နိုင်သော လောကတွင် လူသာလျှင် အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ ပဓါန အကျဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါအဖြစ် ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသည်။ အခြားအခြား သက်ရှိသက်မဲ့ သတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့နှင့် အရာဝထ္ထုတို့ကား လူပုဂ္ဂိုလ်အတွက် အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းစေခြင်းငှာ သာလျှင် ဖန်ဆင်းပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာဦးတည်စက ဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် လောကကြီးကို လွန်စွာ လှပတင့်တယ်စွာ ဖန်ဆင်းပေးထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုအလှအပ တင့်တယ်မှု့ကို ကမ္ဘာဦးလူသားကပင် မိုက်မဲစွာ ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိမိ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားသခင် ပညတ်ထားသည်ကို လူသားသည် ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဤပညတ်ချိုးဖောက်မှု့ကို ထာဝရဘုရားသခင်အပေါ် ပြစ်မှားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်အား ပြစ်မှားမှု့မှ ထွက်ပေါ်လာသော ပြစ်မှု့ဒဏ်များကား၊ မိမိဖန်ဆင်းရှင် ထာဝရဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုသော် လူသားသည် ပညတ်တော်ကို ချိုးဖောက်သည့် နေ့ရက်မှ အစချီ၍ ထာဝရဘုရားရှင်၏ “အမိုက်ကောင်” လူသားဘ၀ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“အမိုက်ကောင်” ဘ၀မှ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် လူသားသည် ကြိုးစား အားထုတ် ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သို့ပင် ကြိုးပမ်းအားထုတ် သည်ရှိသော်လည်း လူသားအတွက်မှာ အချည်းနှီးဖြစ်ရသည်။ ထာဝရဘုရားသခင် အပေါ်ပြစ်မှားခဲ့သော လူသား၏ ပြစ်မှု့ကို မည်သည့် ပုထုဇဉ်လူသားကမျှ ပြန်လည် ချေပပေးဆပ်နိုင်စွမ်း မရှိချေ။ ထာဝရဘုရားသခင်ကပင် လူသား အမိုက်ကောင်ကို ပြန်လည် လက်ခံရသည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ လူသား အမိုက်ကောင်ဘ၀ကို ပြန်လည် ထူထောင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းရပ်ကို ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး လောကတွင် “ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း” ဟုဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထာဝရဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လွယ်လင့်တကူ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့သည် မဟုတ်။ ထာဝရဘုရားသခင်သည် လူသတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့အပေါ်ထားရှိသော မိမိ၏ မဟာဂရုဏာ မေတ္တာတရားတော်ကို လူ့သမိုင်း ဖြစ်ရပ်များမှ တစ်ဆင့်ပွား၍ ထုတ်ဖော် ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရသော် လူ့သမိုင်းဖြစ်ရပ် ဟူသမျှသည် ဘုရားသခင်၏ ကွပ်ကဲ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်တွင် ရှိကြသည်။ လူသားသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ အစွမ်းတမံ ကျွမ်းကျင် ပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း မရှိ။ ထာဝရ ဘုရားသခင်သည်သာလျှင် လူ့သမိုင်းစဉ်အား စိုးမိုး အုပ်ချုပ်တော်မူသော အချုပ်အခြာ အရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူသည်။
လူသားတို့သည် မိမိတို့ ပြုခဲ့သော မဟာ အမှားတရားကြီးကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် သိမြင်ခဲ့ကြပြီး၊ နောင်တတရား ရရှိခါ၊ အမြင်မှန် တရားကို ဖက်ကြလျှက် ထာဝရဘုရားသခင်
အထံတော်သို့ ဦးမော့ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်ကြီး၌ ရှိသော ဓမ္မဟောင်းကျမ်း တစ်စောင်လုံးသည် အထက် ဖော်ပြပါ ကမ္ဘာဦး၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ အကြောင်းစုံအား ရေးသား ဖော်ပြထားသည်ကို ဖတ်ရှု ကြရသည်။
ရှေး အထက်ကျော်ကာလ၌ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ နည်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘေးတို့အား ပရောဖက်များမှ တဆင့် ဗျာဒိတ် ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဤနောက်ဆုံးသော ခေတ်သမယ၌ မိမိ သားတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဗျာဒိတ် ပေးတော်မူသည်။ (ဟေဗြဲ၊ ၁: ၁-၂)။ လူ့အဖြစ်ကို ယူ၍ လူ့ဘောင် လောကသို့ ကြွရောက်လာခဲ့သော ထာဝရဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယေဇူး ခရစ်တော် ဟုခေါ်သည်။ ယေဇူးသခင်သည် လောကသို့ ကြွရောက်လာစဉ် ကိုယ်တော် အလျှင်အဦး ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားဒေသနာတော်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
“အချိန်စေ့ရောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် အုပ်စိုးသော အချိန်ကာလသည် ဆိုက်ရောက်လာပြီ ဖြစ်သည်။ နောင်တယူကြပြီး၊ ကောင်းမြတ်သော တရားဖြစ်သည့် ဧ၀ံဂေလိတရားတော်မြတ်ကို လက်ခံ ယုံကြည်ကြလော့” (မာရ်ကူး၊ ၁: ၁၅)
သို့သော် ကယ်တင်ရှင် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်ကို လူတိုင်း လက်ခံခဲ့ကြသည် မဟုတ်။ ကိုယ်တော်၏ တရားဒေသနာတော်ကို လက်မခံ ယုံမက၊ ကိုယ်တော်ကိုပင် လက်ဝါးကားတိုင်တင်၍ ကွပ်မျက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သေခြင်းမှာ သုံးရက်တာမျှလျှင် ကြန့်ကြာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ကယ်တင်ရှင်သည် သင်္ချိုင်းဂူ အတွင်းမှ ပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ လူသားတို့၏ အပြစ်အတွက် အသေခံတော်မူပြီး၊ ပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူသော ဤကယ်တင်ရှင်အား ယုံကြည် သက်ဝင်သူအပေါင်းတို့သည် ထာဝရတည်မြဲသည့် သုခချမ်းသာကို စံစားကြရမည် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ခရစ်တော်၏ အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် ပြန်လည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် ခရစ်ယာန်တရားတော်၏ သမိုင်း မှတ်တိုင်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ တနည်းဆိုသော် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့၏ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ယုံကြည်ရာအချုပ် ဖြစ်သည်။
ရှေးအဆက်ဆက်မှ လူသတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့ စောင့်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော ကယ်တင်ရှင်သည် ဘုရား၏ သားတော် ယေဇူးခရစ်တော်ပင် ဖြစ်သည်။ ယေဇူးခရစ်တော်သည် ကမ္ဘာဦး လူသား ပြစ်မှားခဲ့သော မဟာ အမှားတရားကြီးကို အစွမ်းတမံ ခြေမှုန်းပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသခင်အား ပြစ်မှားထားသူ လူသားအပေါ် သွေးသစ်လောင်းခါ သားသစ်ကို ပြန်လည် ဖန်ဆင်းပေး၍ မျိုးဆက်သစ် လူသားမျိုးနွယ်စုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ လူသား အမိုက်ကောင်ကို ထာဝရဘုရားသခင်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရင်ခွင်တွင်းသို့ အရောက် ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည့် ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာတို့သည် ယနေ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ရင်ခွင် နှလုံးပိုက်ယူ ယုံကြည် လက်ခံထားသည့် သမ္မာကျမ်းစာတော်၏ နက်ရှိင်းလှသော အနက် အဓိပ္ပါယ်များဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးအပ်ကြပြီး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသော ယုံကြည်ရာ အချက်များပင် ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့၏ ဘာသာရေး အယူဝါဒ အချုပ်ဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာတော်သည် လူသတ္တ၀ါတို့နှင့်ဆိုင်ရာ ရှေးဟောင်း ကမ္ဘာဦးသမိုင်းကို ပြုစုရေးသားထားသည့် လူ့သဘာဝ သမိုင်း မှတ်တမ်းများ မဟုတ်ပေ။ ရှေးဟောင်း လူမျိုးနွယ်ဖွား အုပ်စုကြီးများ တစ်အုပ်စုနှင့် တစ်အုပ်စု စစ်အင်အား၊ လူအင်အား၊ ဘုန်းတန်ခိုး အင်အားပြိုင်ဆိုင်ကြသော စစ်ရေးမှတ်တမ်းစုများလည်း မဟုတ်။ ရှေးဟောင်း လူမျိူးစုကြီးများ၏ ရှေးယဉ်ကျေးမှု့ သမိုင်းမှတ်တမ်းများလည်း မဟုတ်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်သည် အဆိုပါ အကြောင်းအရာများကိုသာ ဦးတည်၍ ရေးသားပြုစုခဲ့သော ကျမ်းဂန်စာအုပ် ဖြစ်ခဲ့ပါမူ၊ ဂျူးဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းကြီးသည် ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာတွင် သမိုင်းတည်နေတော့မည် မဟုတ်။ သမ္မာကျမ်းစာတော် ဆိုသည့် ကျမ်းဂန်စာအုပ်ကြီးသည်လည်း ရှေးဟောင်း သမိုင်းများ စုဆောင်း သိမ်းဆည်းထားသည့် ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု့ပြတိုက်ကြီးများရှိ စာကြည့်တိုက်များမှ စာအုပ်စင်များပေါ်တွင်သာလျှင် တွေ့ရှိနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
သို့ဆိုလျှင် သမ္မာကျမ်းစာတော်တွင် ဖတ်ရှ့ကြရသော အကြောင်း အရာတို့ကို မည်သို့ ဖြေရှင်းရပါမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာတော်တွင် ဖတ်ရှုရသော သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကား၊ ထာဝရဘုရားသခင်၏ ဓမ္မတရားမြတ် အနှစ်သာရကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည့် သမိုင်းရုပ်ပြများအဖြစ်သာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ တနည်းဆိုသော် ပုထုဇဉ် လူသားသည် အဘယ်ကလာ၍ အဘယ်သို့ သွားမည်၊ အဘယ်ကဲ့သို့ မှားယွင်းခဲ့သဖြင့် အဘယ်ကဲ့သို့ ပြုပြင် ဆောင်ရွက်ရမည်၊ အစရှိသော လူဘ၀ ပြသနာရပ်များ၏ ပဟေဠိ ပုစ္ဆာများကို ထုတ်ဖော် ပြသ ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပုထုဇဉ် လူသား၏ မူလ ဇာတိဖြစ်ရပ်မှန်များကို လူ့သမိုင်း ဖြစ်ရပ် ဖြစ်စဉ်များမှ ထုတ်ဖော်ပြသည့် ထာဝရဘုရားသခင်၏ ဗျာဓိတ်တော်ကျမ်း စကားများဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာတော်သည် ထာဝရဘုရားသခင် ဟောပြော မြွက်ကြွားတော်မူသော ဗျာဓိတ်တော်များ ဖြစ်သည်ဟု ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့က အသိအမှတ်ပြုခါ လက်ခံ ယူထားသော ဓမ္မတရားတော်မြတ် ကျမ်းဂန် စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တို့၏ သမိုင်းကား အလွန် ရှည်လျားပေစွ။ ဤစာအုပ်တွင် သမ္မာကျမ်းစာတော် အကြောင်းကို ဖြစ်စေ၊ ခရစ်ယာန် ဓမ္မဒေသနာတော် တရားအကြောင်းကို ဖြစ်စေ၊ စသည့်အကြောင်းအရာများကို ရေးသားတင်ပြရန် ရည်ရွယ်သည် မဟုတ်။ မြန်မာပြည်တွင်ရှိကြသော ဘာသာကြီးလေးရပ်မှ ခရစ်ယာန်ဘာသာ မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာ၍ နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) အကြာ တွေ့ရှိရသော မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလခ် ခရစ်ယာန်သာသနာအကြောင်းနှင့် ယင်း သာသနာတော် မည်သို့ ဆက်လက် ထွန်းကားလာသည့် သမိုင်းရှ့ကွက် တစ်ရပ်ကို ဘာသာရေးသမိုင်း မှတ်တမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရေးသား ပြုစုတင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ငါ၏ တရားဒေသနာတော်ကို လိုက်လံ ဟောပြောကြလော့” (မာရ်ကူး၊ ၁၆:၁၅) ဟု ကယ်တင်ရှင် ယေဇူးခရစ်တော်သည် မိမိ နောက်လိုက် တပည့်တော်ကြီးများအား ဓမ္မတာဝန် ၀တ္တရားတစ်ရပ်ကို ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင် ခရစ်တော်ဘုရား ပေးအပ်ခဲ့သော ဓမ္မတာဝန် ၀တ္တရားတစ်ရပ်ကို ကြိုဆို လက်ခံကြလျှက် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ ခရစ်တော်၏ တရားဒေသနာတော်ကို လိုက်လံ ဟောပြောကြသော သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ကက်သလခ် အသင်းတော် ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှ စ၍ ယနေ့ထက်တိုင် မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် များပြားကြပေသည်။ အေ၊ဒီ၊ ၁၈ ရာစု ဦးပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်သို့ ခရစ်တော်၏ တရားဒေသနာတော်ကို ဟောပြောရန် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်များ အဖွဲတစ်ဖွဲ့ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သမိုင်း မှတ်တမ်းအချို့ကို သမိုင်း စိတ်ဝင်စားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အတွက်နှင့် မြန်မာပြည် ကက်သလခ် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်အတွက် မှတ်တမ်းတစ်ရပ် အဖြစ် ရေးသား ပြုစုတင်ပြ အပ်သော စာအုပ်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်သို့ ရှေးအဆက်ဆက်ကလည်း ခရစ်ယာန် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ရောက်ရှိခဲ့ကြဘူးသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဤစာအုပ်တွင် တွေ့ရှိရသော သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ မှတ်တမ်းများမှာ ရှေးအဆက်ဆက်က ရှိခဲ့ပြီးသော ကက်သလခ် သာသနာတော်ကို မည်သို့ ဆက်လက် ပြုစု ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ပေးခဲ့ကြသည့် သမိုင်း အကြောင်းဖြစ်ရပ်များ သာလျှင် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပေသည်။